नेताहरुलाई यति विघ्न रकम किन चाहिन्छ ? – Maitri News
नेताहरुलाई यति विघ्न रकम किन चाहिन्छ ?
काठमाडौँ । निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घूस ‘मोलमोलाइ’ प्रकरणले राजनीतिक तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचारलाई फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा मात्रै ल्याएको छैन, राजनीतिक नेतालाई यतिविघ्न रकम किन चाहिन्छ भन्ने बहसको समेत ढोका खोलेको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाँस्कोटाले करिब ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइ गरेको अडियोमा सुनिन्छ । त्यसबाहेक प्रेसको लागत नै एक अर्ब रुपैयाँ बढाउनसमेत उनले प्रस्ताव राखेका छन् । आवरणमा उनी एक्लै छन्, यसमा अन्य नेताको संलग्नता छरछैन भन्ने खुलिसकेको छैन । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्ने हो भने बाँस्कोटाले मोलमोलाइ गरेको रकम ६ हजार नेपालीको वर्षभरिको कमाइ हो । भलै, उनले यो रकम लिन नपाउँदै अडियो सार्वजनिक भयो ।
पटक–पटक शासन सत्ताको अनुभव गरेका केही नेताको भनाइ मान्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचार एउटा व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यहीं प्रश्न उठ्छ, बाँस्कोटाले मोलमोलाइ गरेको ७० करोड रुपैयाँ पाएको भए उनी एक्लैले राख्थे होलान् त रु ‘जतिसुकै आँटिलो भए पनि एक्लैले यति ठूलो रकम राख्न सम्भव छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘यस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा पार्टी सञ्चालन र निर्वाचनका लागि भन्दै नेतृत्वलाई बुझाउने गरिन्छ ।’
जस्तो नेकपा नेता युवराज ज्ञवालीले २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेनन् । त्यसको प्रमुख कारण खर्च थियो । तत्कालीन एमालेमा उनी उपाध्यक्ष थिए । टिकट उनका लागि सहज थियो । ‘पार्टी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष र अन्य नेताले मलाई चुनाव लड्न प्रस्ताव गर्नुभयो,’ त्यतिबेलाको कुरा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘तर पैसा नभएकै कारण मैले चुनाव लड्न अस्वीकार गरें । घर–व्यवहार चलाउनेबाहेकको पैसा मसँग छैन । चुनावका लागि करोडौं रुपैयाँ जोहो गर्न सक्दिनँ भनेर टिकट अस्वीकार गरेको हुँ ।’
प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यापारी र ठेकेदारहरूको प्रतिनिधित्व छ । आर्थिक लाभकै आधारमा उनीहरूलाई संसद्‌मा भित्र्याउने गरिएको छ । तत्कालीन एमालेबाट सांसद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले २०७२ कात्तिक ७ मा कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा एमाले र तिनका नेतालाई आफूले पटक–पटक धेरै रकम दिनुपरेको बताएकी थिइन् । संविधानसभा निर्वाचनका बेला एमालेले ९नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले भनेजस्तै चन्दा बैंक खातामार्फत मात्र लिने भनेको थियो । तर, एमालेका नेताले चेक लिन नमानेकाले नगदै दिनुपरेको गोल्छाले खुलाएकी थिइन् ।
२०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका सुडानमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीका लागि खरिद गरिएका बन्दोबस्तीका सामान ९एपीसी० मा २८ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको थियो । त्यतिबेला पनि निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्चको जोहो यसैबाट जुटाइएको बताइन्छ । २०६७ सालमा सरकार निर्माणका लागि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । माओवादी पूर्वलडाकुका नाममा छुट्याइएको राज्यकोषको अनियमिततासमेत बाहिर आयो । एनसेलको कर मिनाहा, फोरजी सेवा विस्तार र ३३ किलो सुनकाण्डदेखि पछिल्लो समय चर्चित ललिता निवासको जग्गासम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा एउटा उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । २०७४ कै निर्वाचनमा पनि एउटै उम्मेदवारले १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको तिनका सहयोगीले बताउने गरेका छन् । तर, उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउँदा भने कानुनले तोकेको सीमाभित्रै रहेर बुझाउने गर्छन् । ‘त्यसरी बुझाउने विवरण ९० प्रतिशतभन्दा बढी झूटा हुन्छन्,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार कम गर्न पार्टी सञ्चालनका लागि राज्य कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था चर्चामा छ । यसरी अनुदान दिँदा अपारदर्शी चन्दा असुली र संस्थागत भ्रष्टाचारमा कमी आउने विश्लेषण छ । राज्यकोषबाट अनुदान दिने हो भने दल सञ्चालन खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष पूर्वप्रशासकहरूको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले १६ वर्षअघि नै राजनीतिक दललाई ‘स्टेटफन्डिङ’ को प्रस्ताव गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६०र६१ को बजेटमा उनले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए पनि संसद्बाट पारित हुन सकेन ।
नेकपा, कांग्रेस, राजपा, समाजवादीलगायत सबै राजनीतिक दलको मूल आर्थिक स्रोत आफ्ना कार्यकर्ताबाट उठाइने सदस्यता शुल्करलेबी हो । यसबाहेक सांसद र लाभका पदमा बसेकाबाट छुट्टै लेबी उठाउने प्रचलन पनि छ । तर, यसले पार्टीका कर्मचारीलाई तलब दिन र कार्यालय चलाउन हम्मे पर्छ । निर्वाचनमा हुने करोडौं खर्चको स्रोत भने जहिले पनि अपारदर्शी हुने गर्छ ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्रीका गाउँमा पानी, बाटो र विजुली
Next Next post: कीर्तिमानी टिमको विदाइ तथा सम्मान